Somaliska ( Soomaali) - Borås Stad
/ Somaliska ( Soomaali)
Somaliska ( Soomaali)
Inagu caawi in aan horumarino dugsiga xanaanada caruurta – fikradaadu waa muhiim!
Sanad kasta waxaanu sameynaa baaritaan ra’yi uruurin ah si aan u ogaano adiga masuulka ilmaha ka ah sida aad u aragtid dugsiga xanaanada caruurta. Jawaabahaagu waxay inagu caawinayaan in aan horumarino dugsiga xanaanada caruurta.
Sanadkii hore tiro badan oo dhan 5056 waalid/masuuliyiinta sharciga ah ee caruruta (boqolkiiba 86) ayaa ka qeybqaatay. Dhammaan dadkiinii wakhtiga ku bixiyay ka qeybqaadashadii ra’yi aruurintii, waad ku mahadsantihiin!
Hadda waxaa soo dhawaaday baaritaankii sanadkaan. Ra’yi aruurinta waxaa laga jawaabi karaa inta u dhaxeysa 17 febraayo ilaa iyo 13 maarso. Jawaabtaada adoon is magacaabin ayaad dhiibanaysaa waxayna qaadanaysaa daqiiqado kooban. Ra’yi aruurinta waxaad ka jawaabaysaa markaad cunugaaga keeneysid ama soo kaxaysanaysid. Warqadda ra’yi aruurinta luuqado badan ayay ku qorantahay.
Fursadaan uga faaideyso in aad ra’yigaaga ku dhiibato.
Caawimadaada aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay!
Dela sidan: Somaliska ( Soomaali)